न्यू योर्ककि जेनेश गुरुङ बनिन्‌ काङ्ग्रेस नेतृ
Janesh Gurung. Photos: eEyeCam
न्यू योर्क, 16 Feb, 09- न्यू योर्कको क्विन्स शहरमा नेपालीहरुको बाक्लो बस्ती रहेको छ, त्यही बस्तीमा हँसिलो अनुहारकी जेनेश गुरुङ नेपालीहरुको कार्यक्रमहरुमा टुप्लुक्क देखा पर्छिन्‌। कतिले उनलाई एक ब्याबसायीको रुपमा चिन्छन्‌, कतिले एक समाजसेवीको रुपमा, कतिले चाँही महिला हक अधिकारको लागि मरिमेट्ने नेत्रिको रुपमा। यि नेपाली चेली को हुन् त?
हो, जेनेश गुरुङ न्यू योर्कमा एक परिचित नाम हो। केही समय अघीसम्म उनको नेपाली फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट थियो- क्विन्सको ज्याक्सन हाइट्समा। उनले त्यसलाई बेचेर अहिले फेरी नयाँ नेपाली रेस्टुरेन्ट नै खोल्ने तरखरमा छिन्। ब्यापार उनको पेशा हो तर राजनीति चाँही उनको 'विद्यार्थी जीवनदेखीको निरन्तर लगाब हो' उनी भन्छिन्।
स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ बजारमा माइती घर भएकी जेनेश त्यहीको क्याम्पसमा नेबी संघको उम्मेद्वार भएर अत्यधिक मतले बिजय भएको कहानी गर्बका साथ सुनाउछिन्।
उनले भनिन्- "मेरो बुवा सुरुदेखी नै नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक र कार्यकर्ता हुनु हुन्थ्यो। मेरी जेठि दिदी माया गुरुङ जो अहिले कोलोराडो, युएसएमा र माइली दिदी योगा गुरुङ, जो युकेमा हुनु हुन्छ, उनिहरु पनि विद्यार्थी कालदेखी नै नेपाली काङ्ग्रेसको भात्री संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्य भएर काम गर्नु भयो। म पनि दिदीहरु र बुवाले रोज्नु भएको दलको सिद्धान्तलाई रोज्न पुगें।"
किन काङ्ग्रेस नै मन पराउनु भयो त? उनले भनिन्- "मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र, समाजबाद र राष्ट्रियता मन पर्‍यो किन कि प्रजातन्त्र र समाजबादले नै जनतामा समानता ल्याउन सक्छ।"
सन् १९९८ को मार्चमा अमेरिका आएकी जेनिश भर्खरै नेपाली जन संपर्क समिती अमेरिकाको न्यू योर्क च्याप्टरको उपाध्यक्ष्य पदमा मनोनित भएकी छिन्।
यो समिती राजनीतिक रुपमा नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको भात्री संगठन भएपनि उनी भन्छिन्-"सस्था राजनीतिक भएपनि हामीले सामाजिक काम गर्दै आएका छौं। जुन सुकै दलका, जहाका नेपाली भएपनि उनिहरुलाई बिना भेदभाब सहयोग गर्दै आएका छौं।"
अमेरिकामा जन संपर्क सिमितीमा बिबाद आएकोमा जेनेश दुखित छिन्। तर उनी भन्छिन्, "काङ्ग्रेस समर्थकहरु बिचको एकताको बिकल्प छैन। एकता कायम गर्ने प्रयास जारी छ।"
यसरी जेनेश पहिले काङ्रेसीहरुमै एकताको नाता जोड्नेतिर लागेकी छिन् भने राजनीति, समाजसेवा र ब्यापारलाई "ब्यालेन्स" गरेर लैजान पनि उत्तिकै तल्लिन छिन्। आफ्नो श्रीमान् टासी शेर्पाबाट उनको काममा पूर्ण सहयोग भएकोमा उनी ज्यादै खुशी छिन्। उनको एक मात्र छोरी निकिता इन्डियाको मसुरीमा हाइ स्कुल (कक्षा १० मा) पढ्दैछिन्।
जेनेशका परिवारका सबै सदस्यहरु कामको शिलशिलामा बिभिन्न देशहरुमा बसोबास गर्न पुगेका छन्। उनकी एक दिदी योगा गुरुङ र दुई दाजुहरु (चुनबहादुर गुरुङ, प्रेमबहादुर गुरुङ) युकेमा छन् भने एक दाजु (केहरसिंह गुरुङ) हङ्कङमा र कान्छो भाई जीवन गुरुङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धी साउदी अरबियामा काम गर्दछ्न् । यिनका बुवा होमबहादुर गुरुङ बिती सक्नु भएको छ्।
यिनकि आमा धरती गुरुङ हङ्कङमा रहेका दाजुसँग बसोबास गर्दै आएकिछिन्। यिनकि जेठि दिदी माया गुरुङ कोलोराडो, युएसएमा र एक बहिनी पम्फा गुरुङ चाँही सिङ्गापुरमा रहेकिछिन्।